आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कसरी गर्ने पुजा ? « Gaunbeshi
आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कसरी गर्ने पुजा ?
काठमाडौ । भाद्रपद कृष्ण अष्टमीमा भगवान कृष्णको जन्म भएको कारणले यसलाई कृष्ण जन्माष्टमी भनिन्छ। भगवान कृष्ण अष्टमी तिथिमा जन्मेका थिए, त्यसैले उनी जन्माष्टमीको निर्धारणमा अष्टमी तिथीको धेरै ख्याल राख्छन्। यस दिन श्री कृष्णको पूजा गर्दा सन्तान सुख, स्वास्थ्य र र समृद्धि प्राप्ति हुन्छ। हरेक इच्छा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पर्व मनाएर पूरा गर्न सकिने धार्मीक विश्वास छ। ती व्यक्तिहरु जसको चन्द्र कमजोर छ आज विशेष पूजाबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।
जन्माष्टमी को लागी श्री कृष्णको मूर्ति कसरी छनौट गर्ने ?
सामान्यतया जन्माष्टमीमा बालकृष्णको स्थापना गरिन्छ। तपाइँ तपाइँको आवश्यकता र इच्छा मा आधारित कुनै पनी ढाँचा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम र वैवाहिक जीवन को लागी राधा कृष्ण, बच्चाहरु को लागी बाल कृष्ण र सबै इच्छाहरु को लागी बंशी कृष्ण को स्थापना गर्नुहोस्। शंख र शालिग्राम पनि यस दिन स्थापित गर्न सकिन्छ।
श्रीकृष्णको श्रृंगार कस्तो हुनेछ ?
श्री कृष्णको श्रृंगारमा फूलहरु को धेरै प्रयोग गर्नुहोस्। उनीलाई पहेंलो कपडा, गोपी चन्दन र चन्दनको सुगन्ध संग सजाउनुहोस्। कालो रंग प्रयोग नगर्नुहोस्। यो उत्तम हुनेछ यदि वैजन्तीको फूल कृष्ण लाई चढाईन्छ।
प्रसाद के बनाउने ?
पञ्चमृत तयार गर्नुहोस्। यसमा तुलसी दल पनि राख्नुहोस् । मेवा फल, मक्खन र मिश्रीलाई प्रसादका रुपमा बनाउनुहोस् । केही ठाउँमा धनियाको बीउ पनि प्रदान गरिन्छ। यस दिनमा श्री कृष्ण को लागी सबै प्रकारका व्यंजनहरु सहितको सात्त्विक खाना प्रदान गरिन्छ।
जन्माष्टमी कसरी मनाउने ?
बिहान नुहाउनुहोस् र उपवास वा पूजाको भाकल लिनुहोस्। दिन भर पानी वा फल लिनुहोस् र सात्विक हुनुहोस्। मध्यरातमा भगवान् कृष्णको धातुको मूर्ति एउटा भाँडोमा राख्नुहोस्। पहिले त्यो मूर्तिलाई दूध, दही, मह, चिनी र अन्तमा घ्युले स्नान गर्नुहोस्। यसलाई पञ्चमृतस्नान भनिन्छ।
त्यसपछि मूर्तिलाई पानीले नुहाउनुहोस्। त्यस पछि पीताम्बर, फूल र प्रसाद प्रदान गर्नुहोस्। दिमागमा राख्नुहोस् कि अर्पण गर्ने सबै चीजहरु शंखमा राखेर मात्र चढाउनुहोस् । पूजा गर्नेले कालो वा सेतो लुगा नलगाउनुहोला । यस पछि आफ्नो इच्छा अनुसार मन्त्र जप गर्नुहोस्। अन्त्यमा, प्रसाद लिनुहोस् र यसलाई वितरण गर्नुहोस्।